Mu’asasada Al-minhaaj oo Raashin u qaybisay dadkii ku barakacay dagaalkii Gaalkacyo.[Masawiro]
November 28, 2016 - Written by Editor
Gaalkacyo:-Mu’asasada Alminhaaj Gobolka Mudug oo gacan ka helaysa Gudoomiyaha Guud ee Alminhaaj ayaa raashin u qaybisay 250 qoys oo ka mid ah dadkii ku barakacay dagaalkii Gaalkacyo isla markaana ku soo noqday guryahoodii iyaga oo aa inta badan awoodin in ay helaan waxay cunaan taas oo sababtay in qoysas badan ay dabku ka seexdo.
Tilaabadaan ayaa imaanaysa waqti ay bulsho badan baahi u qabtay in ay helaan wax ay ku noolaadaan waana Hay’addii ugu horaysay oo dadkaan dagaaladu guryahooda ka saareen gaarsiiyay raashin deeq ah .
Deeqdaan oo iskugu jirtay Raashinka Qaybihiisa kala duwan sida Bariis/Bur /Sonkor/Saliid/ Timir waxaa qoyskiiba lasiiyay waxay ku noolaadaan Mudo Bil ah sida uu sheegay Gudoomiyaha guud ee Mu’asasada Alminhaaj Sh Maxamed C/Laahi Cabdulle.
Dhanka kale Gudoomiyaha Mu’sasada Alminhaaj G/Mudug Cawil Axmed Muumin waxaa uu mahadceliyay Mu’asasada Guud ee garab istaagtay Shacabkaan baahan .
Ugu Danbayntii Qaybinta Deeqdaan ka dib waxaa goobta ka hadlay Gudoomiyaha Mu’asasada alminhaaj Heer Puntland Sh.Maxamed C/laHI Cabdulle oo u Mahad Celiyay Jumciyada Shaariqa Khayriya Oo Minhaaj Inta badan kacaawisa Deeqa haan oo kale Waxaana uu si gaar ah ugu mahadceliyay Mu’asasada Alminhaaj Xafiiskeeda Gobolka Mudug oo sidii la rabay dadkaan u soo xulay.